निर्णय कार्यान्वयन गर्न यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत मातहतका कार्यालयलाई पटक÷पटक पत्राचार गरेको थियो ।
तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिएको थिएन् । (रासस)
प्रकाशित : शनिबार, जेठ ०५, २०७५१३:०६
काठमाडौंमा ६ महिनाकी गर्भवती महिलाको घाँटी थिचेर हत्या !
मृगको शिकार गर्ने क्रममा गरे आफ्नै दाइको शिकार ! भाइको गोलि लागि दाइको मृत्यु !